China Turkey Programme Citizenship Manufacturing and Factory | Serivisy fampirantiana fampiratiana tany Shanghai
Programme an'ny zom-pirenen'i Turkey
Ny mpangataka dia mety mifantina amin'ny safidy fampiasam-bola maro, izay samy manana ny fandaharana amin'ny zom-pirenena tiorka.
Ny mpangataka dia mety mifantina amin'ny safidy fampiasam-bola maro, izay samy manana ny fandaharana amin'ny zom-pirenena tiorka. Ny fihenan'ny famatsiam-bola farany farafahakeliny farafahakeliny USD 250,000 fotsiny dia mahatonga ny programa zom-pirenena tiorka ho iray amin'ny maha-olom-pirenena mora vidy kokoa amin'ny alàlan'ny programa fampiasam-bola hita eran'izao tontolo izao. Ny fanodinana fampiharana dia mety ho haingana tahaka ny telo ka hatramin'ny enim-bolana.
FIDERANA INVESTMENT 1: USD 250 000 farafahakeliny: Real Estate
Tena tsy ela akory dia nampidinin'i Torkia ny haben'ny fampiasam-bola ilaina amin'ny fahazoana zom-pirenena Tiorka (pasipaoro Tiorka) avy amin'ny USD 1.0 tapitrisa ka hatramin'ny USD 250.000 ho an'ireo mpangataka mividy trano na fananana eo an-toerana. Ity fampiasam-bola amin'ny trano ity dia azo ampidirina ao amin'ny trano fonenana, fananana ara-barotra, na tany tsy mbola voavoatra. Ny fananana / ies dia tokony hatao mandritra ny telo taona fara-fahakeliny.
TOKO FAHA-2: USD 500 000 farafahakeliny: famatsiam-bola amin'ny banky / Fividianana renivohitra / Famatoran'ny governemanta / Tahirim-bola trano sy trano
Ity safidy fampiasam-bola ity dia mitaky vola farafahakeliny USD 500,000 amin'ny iray amin'ireo fiara voatanisa voatanisa. Ny fampiasam-bola dia tsy maintsy atao mandritra ny telo taona farafahakeliny.
Previous: Fahazoan-dàlana Permanent ho an'ny Chipra
Manaraka: Fividianana fananana any Japon
Tseky momba ny fifindra-monina any Tiorkia
Turkey Mampiavaka fananana
Turkey Show Show
Fampirantiana Real Estate Turkey
Fividianana fananana any Japon
Philippines Market Market Market amin'ny 2020
Malaysia Market Market View 2020